> Resource> Flash Drive> Easy Guide nke Imation USB Iweghachite
Olee Otú M Pụrụ weghachite Data si a Imation USB Flash Drive?
My PC mberede oyi kpọnwụrụ, otú ahụ ka m rebooted ya. M wepụrụ m 8GB Imation USB na-enweghị unpluging. Mgbe m ịtinye-ya na m PC ọzọ, na kọmputa m ghọtara m USB mbanye ma m nwetara ozi na m kwesịrị Ọkpụkpọ USB ma ọ bụrụ na m chọrọ iji ya. Bụ n'ebe ọ bụla ngwọta ịgwọta nsogbu m? M mkpa iji nweta m data azụ!
Nke a USB formatting nsogbu bụ otu n'ime ihe ndị kasị ihe na-eme ka USB data ọnwụ nke. Ihe ndị ọzọ nwere ike ịbụ nhichapụ, virus ọrịa ma ọ bụ ọbụna usoro njehie. Dabara nke ọma, omume dị na Internet na-enwe ike inyere gị iji weghachite ehichapụ na formatted faịlụ site USB flash draịva gị, gụnyere Imation USB. Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac dị otú ahụ a omume, nke na-eme ka o kwe omume iji weghachite a dịgasị iche iche nke faịlụ na ụdị si gị Imation USB, gụnyere oyiyi, videos, ọdịyo faịlụ, akwụkwọ faịlụ, wdg
A ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery dị ugbu a. N'ọnwụnwa a version-enyere gị aka ịmụta otú usoro ihe omume na-arụ ọrụ na-enye gị ohere iji iṅomi gị Imation USB flash mbanye tupu ịzụta zuru version.
Download ikpe mbipute free ugbu a! Plus, Windows version nke Wondershare Data Recovery bụ ugbu a n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Windows 8.
Usoro Imation USB Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
Nzọụkwụ 1 Họrọ Iweghachite ọnọdụ naghachi Data si Imation USB
Jikọọ gị Imation USB na kọmputa gị na-agba ọsọ Wondershare Data Recovery na gị na desktọọpụ.
Biko họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode si 3 mgbake ụdịdị nke dị na mmalite interface.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị Imation USB
Na nke a nzọụkwụ, ị dị nnọọ mkpa iji họrọ mbanye akwụkwọ ozi gị Imation USB na pịa "Malite iṅomi" na-amalite ịgụ isiokwu furu efu data.
Rịba ama: "Kwado Deep iṅomi" bụ ezi Doppler nhọrọ, nke na-ewe ogologo oge karịa nkịtị iṅomi.
Nzọụkwụ 3 weghachite Data si Imation USB selectively
Ugbu a Wondershare Data Recovery ga-depụta niile hụrụ ọdịnaya na gị Imation USB na edemede, dị nnọọ ka ị pụrụ ịhụ site oyiyi n'okpuru.
Iji ego otú ọtụtụ faịlụ na ị ga-enwe ike iji naputa, ị nwere ike ịlele faịlụ aha otu otu; ma ọ bụ n'ihi na ihe oyiyi, na i nwere ohere ka ịhụchalụ ha.
Wee họrọ faịlụ gị mkpa ma pịa "Naghachi" zọpụta ha azụ kọmputa gị ma ọ ọzọ nchekwa na ngwaọrụ.
1 Nke a ndu dabeere na Windows version nke Wondershare Data Recovery. Ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac onye ọrụ, ị pụrụ ịgbaso yiri arụmọrụ naghachi data si Imation USB na Mac version.
2 Iji zere data overwritten, anyị ukwuu atụ aro ka ị na-adịghị na-recoverable data gị Imation USB n'oge mgbake.